ओलीले ‘विदेशी शक्तिको अगाडि आ’त्मसमर्पण गरेको’ प्रचण्डले आ’रोप लगाए !:: Mero Desh
ओलीले ‘विदेशी शक्तिको अगाडि आ’त्मसमर्पण गरेको’ प्रचण्डले आ’रोप लगाए !
Published on: २५ चैत्र २०७७, बुधबार ११:१३
काठमाडौं,२५ चैत्र । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि विदेशी श’क्तिको अगाडि आ”त्मसमर्पण गरेको आ’रोप लगाएका छन् । आज सल्यानको सल्लेबजारमा सम्बोधन गर्दै उनले ओलीमाथि प्रतिगमनको आ’रोप लगा उँदै जनता उठ्ने बेला आएको बताए ।
‘विदेशी श’क्तिको अगाडि आ’त्मसमर्पण गरेर देशलाई घात गर्नेहरु पनि देखिएका छन्,’ प्रचण्डले ओलीप्रति सं’केत गर्दै भने,‘ गोर्वाचोभले कम्युनिस्ट पार्टी नै सक्याइदिए ।’ उनले जनता प्रतिगमनवि’रुद्ध जुनुपर्ने बेला आएको बताए भिडियो अन्तिममा राखिएको छ ! हेरेर प्र’तिक्रिया दिनु होला !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डले रुसका अन्तिम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मिखायल गोर्वाचोभसँग तुलना गरे!उनले गोर्वा चोभपथमा ओली चलिरहेको टिप्पणी समेत गरे । देशलाई नै सं’कटमा पार्ने ष’ड्यन्त्रहरु भइरहेको प्रचण्डको भनाई थियो ।
देशमा प्राप्त उ’पलब्धिलाई सिध्याउने ष’ड्यन्त्रप्रति सबै एकजुट भई लड्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै प्रचण्डले भने,‘हिटलर आफूलाई सबैभन्दा ठूलो रा’ष्ट्रवादी भन्थे ।’ओलीले ‘विदेशी शक्तिको अगाडि आ’त्म समर्पण गरेको’ प्रचण्डले आ’रोप लगाए !रिपोटर नेपाल